कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न आवश्यक छ – Janaubhar
कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न आवश्यक छ
प्रकाशित मितिः बुधबार, पुस ३०, २०७१ | 183 Views ||
– माधव अधिकारी
(शाखा प्रबन्धक) कृषि बिकास बैंक शाखा कार्यालय, घोराही दाङ
कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय दाङका शाखा प्रबन्धक माधव अधिकारी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकेको खण्डमा बैंकको लगानी बढ्ने बताउँछन् । अहिले अधिकांश बैंकले घर जग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरिरहेको उनको भनाई छ । कृषि बैंकको लगानीको स्थिति, समस्या तथा समग्र बैंकिङ अवस्थाका बारेमा केन्द्रित भएर अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी । –सम्पादक
कृषि विकास बैंकको लगानीको स्थिति कस्तो छ ?
हामीले लगानी गर्दा वार्षिक लक्ष्य र सिलिङको आधारमा गर्छौं । राष्ट्र बैंकको अधीनमा रहेर हामीले काम गर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा हामीले लक्ष्यभन्दा १ सय ३५ प्रतिशत बढी लगानी गरेका थियौं । चालु आवको चार महिनामा हामीले ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य लिएका थियौं । तर ११ करोड ६५ लाख ७ हजार लगानी गर्न सफल भयौं । साँवा असुली पनि लक्ष्यभन्दा १ सय ४० प्रतिशत बढेको छ । यस अबधिमा ७ करोड ३७ लाख ४५ हजार साँवा असुली गर्ने लक्ष्य लिएकोमा बैंकले १० करोड ३५ लाख उठाउन सफल भएको छ । चालु आवमा हामीले गत आवमा गरिएको लगानीभन्दा थप १४ प्रतिशत बढी लगानी गर्न पाउँछौं ।
लगानीका दृष्टिले कुन क्षेत्रमा बढी छ ?
२०६२ सालभन्दा अघिसम्म कृषि विकास बैंकले विशेष गरेर कृषि क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्दथ्यो । त्यतिबेला सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु जनता सामु पु¥याउने काम मात्र हुन्थ्यो । अब भने कृषि विकास बैंक व्यावसायिक भइसकेको छ । हुन त हामीले सरकारले कृषक लक्षित लिइएका केही कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । तर, अब पुरानो तरिकाले काम गरेर पुग्दैन । हामी व्यावसायिक हुन जरुरी छ । त्यसैले हामी आफैले लगानीका क्षेत्र खोज्छौं । पछिल्लो समय कुखुरा र माछापालनमा बढी लगानी भएको छ । हुन त कृषि विकास बैंकले नूनदेखि सुनसम्म लगानी गर्छ । दाङमा बाख्रापालनतर्फ पनि लगानीको राम्रो आधार देखिएको छ । तर, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्य क्षेत्रजस्तो त्यति सहज छैन ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न कस्तो समस्या छ ?
मुख्य कुरा त अहिलेसम्म कृषिमा व्यावसायीकरण हुन सकेको छैन । अहिले पनि कृषिमा ऋण लिन आउनेहरु वास्तविक रुपमा कृषिमा लाग्नभन्दा पनि अन्य प्रयोजनका लागि रकम प्रयोग गर्ने उद्देश्यले आउँछन् । वास्तविक रुपमा कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न सकेको खण्डमा बैंकहरुलाई लगानी गर्न सहज हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा जोखिम समेत बढी हुने भएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो ।
कृषिमा व्याजदर कस्तो छ ?
कृषिमा १० देखि १५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण प्रवाह भइरहेको छ । हुन त सरकारले कृषकलाई अनुदानमा ६ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तर, त्यसको कार्यविधि आइ नसकेकाले कार्यान्वयनमा आएको छैन । सरकारले कार्यान्वयनको लागी परिपत्र गरेमा हामीले ६ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँछौं ।
बैंकहरुले कृषि तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भन्दा घर जग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको देखिन्छ । किन होला ?
मेरो कार्य क्षेत्र दाङ भएकाले म यहाँको वस्तुस्थितिको विषयमा कुरा गर्छु । दाङमा अहिले पनि त्यति आर्थिक गतिविधि भएको छैन । आवास बनाउँदा धेरै खर्च लाग्ने भएकाले मान्छेहरु बैंकको सहारा लिन्छन् । हामीले पनि साँवा तथा व्याज असुली हुने आधार देखेमा लगानी गर्छौं । यही सुविधा देखेर धेरैले एकै पटक दुई तीन तले भवन बनाउन खोज्छन् । हामीले सबै व्यक्तिलाई यो क्षेत्रमा लगानी गर भनेर भन्न सक्दैनौं । हामीले त प्रक्रिया पूरा गरेर आउने र सुरक्षित देखिएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । कृषि तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनको लागि त सरकारले नै प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्छ । यसमा बैंकहरुको भूमिका रहदैन ।
कृषिमा लगानी नबढ्नुको कारण के हो ?
अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा जोखिम बढी हुन्छ । जोखिम बढी हुने भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न कृषकहरु तयार हुँदैनन् । अहिले पनि दैनिक हजारौं युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । कृषिमा आधुनिक उपकरण, बीउ, मल तथा सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्छ । कृषितर्फ आर्कषित गर्नको लागि सरकारले विभिन्नखाले सहुलियत तथा अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
धैरै मान्छेहरु अहिले पनि अरुभन्दा कृषि विकास बैंकमा बढी आकर्षित भएको देखिन्छ । किन होला ?
पहिले कुरा, कृषि विकास बैंक सबै जनताका लागि हो । हामी अन्य बैंकभन्दा सहज छौं । अन्य बैंकमा सामान्य किसानहरु गएर आफ्नो भनाई सहजरुपमा राख्न सक्दैनन् । तर, कृषि विकास बैंकमा उनीहरुले सहज अनुभव गर्छन् । हाम्रो कार्यशैली निकै सहज छ । अर्को कुरा हामीप्रतिको विश्वास पनि हो । विशेषतः तल्लो र मध्यमवर्गका मान्छेहरु हामीप्रति आर्कषित हुन्छन् ।
तपाईले राम्रो गरेका छौं त भन्नुभयो । तर, अहिले पनि कृषि विकास बैंकले परम्परागत तरिकाले काम गरिरहेको छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?
यो गुनासोमा सत्यता छ । अहिले पनि ५० प्रतिशत कर्मचारीहरु जागिरे मानसिकतामा छन् । उनीहरु व्यावसायिकभन्दा पनि जागिर पकाउने धाउन्नमा लागेका छन् । नेतागिरी गर्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । अब कर्मचारीहरुलाई सुधार्नको लागि दण्ड र पुरस्कारको नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । युनियनको झोला बोकेर खान खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । कृषि बैंकमा रहेको जनशक्तिको व्यवस्थापन मुख्य चुनौति हो ।
उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनको लागि के गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले लगानी सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले प्रचारमुलक काम बढी भएको छ । बैंकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई प्रचारमुलक कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सक्दैन । त्यसका लागि राज्यले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । जथाभाबी आवास निर्माणलाई रोक्नुपर्छ । अहिले धेरै बैंकको ध्यान आवासतर्फ गइरहेको छ । यसले समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउँदैन । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको खण्डमा मात्र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सकेमा पनि उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी बढ्न सक्छ । त्यस्तै अन्य ठूला उत्पादनमुलक उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । लगानीको वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ ।
कृषि विकास बैंकमा लामो समयदेखि काम गर्नुभयो । यहाँको मुख्य समस्या के देख्नुभएको छ ?
अहिले बैंक क्षेत्रमा निकै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । तर, कृषि बैंकमा त्यो व्यावसायिक चिन्तन भएको जनशक्तिको निकै कमी छ । स्थानीय कर्मचारीलाई हायर एण्ड फायर गर्ने अवस्था पनि छैन । अहिले पनि युनियनहरुको दबदबा छ । युनियनहरु व्यवस्थापनमाथि हावी भएका छन् । उनीहरुमा व्यावसायिक चिन्तनको विकास गर्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा कृषि विकास बैंक अन्य बैंकसँग सजिलैसँग प्रधिस्पर्धा गर्न सक्छ । प्रतिस्पर्धाको लागि सबैभन्दा पहिले बैंकले आन्तरिक व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । यी काम गर्न सकेको खण्डमा कृषि बैंकमा थप आकर्षण बढ्नेछ ।
Posted in कुराकानी, कृषि/अर्थ वाणिज्य
Prevमधु, निशा र सन्तोषको ‘शराब’ बजारमा
Nextमहिलालाई नआएको लोकतन्त्र